1 Ndị Eze 21 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
21 O wee ruo mgbe ihe ndị a gasịrị na e nwere otu ubi vaịn bụ́ nke Nebọt onye Jezril, nke dị na Jezril,+ n’akụkụ obí Ehab eze Sameria. 2 Ehab wee gwa Nebọt, sị: “Nye+ m ubi vaịn gị,+ ka m jiri ya mere ubi+ akwụkwọ nri,+ n’ihi na ọ dị nso n’ụlọ m; ka m nye gị ubi vaịn ka ya mma n’ọnọdụ ya. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ dị gị mma,+ m ga-enye gị ego ka ọ bụrụ ọnụ ahịa ya.” 3 Ma Nebọt sịrị Ehab: “Tụfịakwa!+ Dị ka Jehova si ele ihe anya,+ agaghị m enye gị ihe nketa nna nna m hà.”+ 4 N’ihi ya, Ehab batara n’ụlọ ya, nọrọ ná mwute ma gbarụọ ihu n’ihi okwu Nebọt onye Jezril gwara ya, mgbe ọ sịrị: “Agaghị m enye gị ihe nketa nna nna m hà.” O wee dinara n’ihe ndina ya, ma chee ihu ya ebe ọzọ,+ o righịkwa nri. 5 N’ikpeazụ, Jezibel+ nwunye ya bịakwutere ya wee sị ya: “Gịnị mere i ji enwe mwute na mmụọ gị,+ i kweghịkwa eri nri?” 6 O wee sị ya: “Ọ bụ n’ihi na m gwara Nebọt onye Jezril, sị, ‘Resị m ubi vaịn gị. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ kara gị mma, ka m nye gị ubi vaịn ọzọ n’ọnọdụ ya.’ Ma ọ sịrị, ‘Agaghị m enye gị ubi vaịn m.’”+ 7 Jezibel nwunye ya wee sị ya: “Ọ́ bụghị gị na-achị Izrel?+ Bilie rie nri, ka obi gị nweekwa aṅụrị. Mụ onwe m ga-enye gị ubi vaịn Nebọt onye Jezril.”+ 8 Ya mere, o dere akwụkwọ ozi+ n’aha Ehab ma were akara eze kaa ha,+ ma zigara ndị okenye+ na ndị a ma ama nọ n’obodo ya, bụ́ ndị ha na Nebọt bi, akwụkwọ ozi ndị ahụ. 9 Ma o dere n’akwụkwọ ozi ndị ahụ, sị:+ “Kpọsaanụ ibu ọnụ, meekwanụ ka Nebọt nọrọ n’isi oche. 10 Meekwanụ ka ndị ikom abụọ+ ndị na-abaghị n’ihe+ nọdụ n’ihu ya, ka ha gbagidekwa ya akaebe,+ sị: ‘Ị bụrụ Chineke na eze ọnụ!’+ Kpọpụtanụ ya, jiri nkume tụgbuo ya.”+ 11 Ya mere, ndị ikom obodo ya, ndị okenye na ndị a ma ama bi n’obodo ya, mere nnọọ dị ka Jezibel ziri ha, dị nnọọ ka e dere n’akwụkwọ ozi ndị o zigaara ha.+ 12 Ha kpọsara ibu ọnụ,+ ha wee mee ka Nebọt nọrọ n’isi oche. 13 Mgbe ahụ mmadụ abụọ n’ime ndị ikom ahụ, bụ́ ndị na-abaghị n’ihe, batara wee nọdụ n’ihu ya; ndị ahụ na-abaghị n’ihe malitere ịgbagide ya akaebe, ya bụ, Nebọt, n’ihu ìgwè mmadụ ahụ, sị: “Nebọt bụrụ Chineke na eze ọnụ!”+ E mesịa, ha kpọpụtara ya ná mpụga obodo ahụ wee jiri nkume tụgbuo ya.+ 14 Ha wee zigara Jezibel ozi, si: “E jiriwo nkume tụgbuo Nebọt.”+ 15 O wee ruo na ngwa ngwa Jezibel nụrụ na e jiriwo nkume tụgbuo Nebọt, Jezibel gwara Ehab ozugbo ahụ, sị: “Bilie, weghara ubi vaịn Nebọt onye Jezril,+ bụ́ nke ọ jụrụ iresị gị eresị; n’ihi na Nebọt adịkwaghị ndụ, kama ọ nwụwo.” 16 O wee ruo na ngwa ngwa Ehab nụrụ na Nebọt anwụwo, Ehab biliri ozugbo ịgbada n’ubi vaịn Nebọt onye Jezril, ka o weghara ya.+ 17 Okwu Jehova+ wee ruo Ịlaịja+ onye Tishbe ntị, sị: 18 “Bilie, gbadaa ka i zute Ehab eze Izrel, onye nọ na Sameria.+ Ọ nọ n’ubi vaịn Nebọt, bụ́ ebe ọ gbadara iweghara ya. 19 Gwa ya, sị, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ì gbuwo ọchụ,+ wegharakwa?”’+ Gwakwa ya, sị, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “N’ebe ahụ+ nkịta rachara ọbara Nebọt ka nkịta ga-aracha ọbara gị, ọbụna nke gị.”’”+ 20 Ehab wee sị Ịlaịja: “Onye iro m, ị̀ chọrọwo m bịa?”+ o wee zaa, sị: “Achọrọwo m gị bịa. ‘Ebe ọ bụ na i rewo onwe gị ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova,+ 21 lee, m ga-eme ka ọdachi dakwasị gị;+ m ga-ebibikwa gị+ ma bipụ onye ọ bụla bụ́ nwoke+ nke si n’ahụ́ Ehab na onye na-enweghị enyemaka na onye na-abaghị n’ihe n’Izrel. 22 M ga-emekwa ka ụlọ gị dịrị ka ụlọ Jeroboam+ nwa Nibat na ụlọ Beasha+ nwa Ahaịja, n’ihi ihe mkpasu iwe i mere, meekwa ka Izrel mehie.’+ 23 Banyere Jezibel, Jehova kwukwara, sị, ‘Nkịta ga-erichapụ Jezibel n’ibé ala dị na Jezril.+ 24 Onye ọ bụla si n’ahụ́ Ehab nke nwụrụ n’obodo, nkịta ga-erichapụ ya; onye ọ bụla kwa nke nwụrụ n’ọhịa, anụ ufe nke eluigwe ga-erichapụ ya.+ 25 O nwebeghị ma ọlị onye dị ka Ehab,+ bụ́ onye rere onwe ya ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova, onye Jezibel+ nwunye ya duhiere.+ 26 O wee na-eme oké ihe arụ site n’iso arụsị dị iche iche na-asọ oyi ka nsị,+ dị ka ihe niile ndị Amọraịt mere si dị, bụ́ ndị Jehova chụpụrụ n’ihu ụmụ Izrel.’”+ 27 O wee ruo na ngwa ngwa Ehab nụrụ okwu ndị a, ọ dọwara uwe ya wee yiri ákwà iru uju;+ o wee buo ọnụ ma yiri ákwà iru uju dinara ala ma na-eje ije ná mwute.+ 28 Okwu Jehova wee ruo Ịlaịja onye Tishbe ntị, sị: 29 “Ị̀ hụwo otú Ehab si weda onwe ya ala n’ihi m?+ Ebe ọ bụ na o wedara onwe ya ala n’ihi m, agaghị m eweta ọdachi ahụ n’ụbọchị ya.+ Ọ bụ n’ụbọchị nwa ya ka m ga-eme ka ọdachi ahụ dakwasị ụlọ ya.”+